China DAA Air Circuit Breaker ifektri abakhiqizi | I-DaDa
I-DAA Air Circuit Breaker
I-DAA uchungechunge lwe-Low Voltage Air circuit breaker air breaker ifanelekile ukujikeleza kwe-AC 50Hz / 60Hz ngevolthi yensizakalo elinganisiwe engu-400V, 690V kanye nensizakalo ekaliwe njengamanje kuze kufike ku-6300A. Isetshenziselwa kakhulu ukusabalalisa amandla kagesi nokuvikela amasekethe nemishini kagesi ngokumelene ukulayisha ngokweqile, i-voltage engaphansi, iphutha elifushane lesifunda kanye nesigaba esisodwa.
Ikheli: IShanghai DaDa Electric Co, Ltd.
Ngemisebenzi yokuvikela ehlakaniphile futhi ekhethiwe, i-breaker ingathuthukisa ukuthembeka kokuphakelwa kwamandla, futhi igweme ukwehluleka kwamandla okungadingekile.I-breaker isebenza eziteshini zamandla, izimboni, izimayini (ze-690V) nezakhiwo eziphakeme zanamuhla, ikakhulukazi uhlelo lokusabalalisa isakhiwo esihlakaniphile.
Izinzuzo ezihlinzekelwe ukwakhiwa nokwenziwa kwemihlangano ye-LV
>> Nge high iDemo-wesifunda breaking umthamo, Non ionization ibanga
>> Imisebenzi yokuvikela ephelele ehlakaniphile.
Iyunithi lohambo lwe-elekthronikhi ngamasu asuselwa ku-microprocessor anemisebenzi yokuvikela ehlakaniphile.
>> Zonke izakhiwo ze-modular
Idizayini ye-Modular yochungechunge lonke, ukugcinwa okulula nokulungiswa mahhala.
>> Ukwehlukanisa kabili, kuphephile futhi kunokwethenjelwa
Ukwehlukaniswa kabili okusuka ebusweni bangaphambili bama-breaker wesifunda, kusetshenziswe ngokuphepha nangokuthembekile.
Umklamo ohlangene, Isisindo esincane
>> Uhla oluphelele lwezesekeli. Okuvamile kulo lonke uchungechunge
>> Ukuhambisana nezindinganiso zomhlaba nezamazwe.
Inothi lobuchwepheshe Inombolo yemodeli yalowo mkhiqizo i-DW 45 esetshenziswe eMbonini kagesi enamandla aphansi.
· Izimo zokusebenza ezijwayelekile
>> Amazinga okushisa omoya kuma-DA Konke angabi ngaphezu kuka- + 40 ℃ nangaphansi kuka-5 ℃ kanti isilinganiso saso esikhathini samahora angama-24h asidluli + 35 ℃.
>> Ukuphakama kwesiza sokufakwa akudluli ku-2000m
>> Izimo Atmospheric
Umswakama ohlobene nawo awudluli kuma-50% emazingeni okushisa aphezulu angama- + 40 ℃, Umswakama ophakeme ohlobene mhlawumbe uvunyelwe emazingeni aphansi okushisa. Inani elisho inani eliphakeme lenyanga yomswakama kakhulu ngama-90%, kanti izinga lokushisa eliphansi kunawo wonke kule nyanga lingu- + 25 ℃ .Ukunakekelwa kufanele kuthathwe
ukufinyela okulingene okungenzeka ebusweni bemikhiqizo ngenxa yokwehluka kwezinga lokushisa.
· I-insta ejwayelekilellation conditions
>> Ama-breaker circuit ama-DAA wonke azofakwa ngokuya ngemithetho yomkhiqizi. Ukuthambekela okume mpo kwama-breakers wesifunda i-DA Konke kungeqi ku-5 °
· Isigaba sokufaka
Kulinganiswe ngo voltage yokusebenza
Circuit Isifunda esikhulu
◆ Ikhoyili yokukhishwa kwamandla kagesi
Transform I-Pirmary coil power transformer
Circuit Isifunda esisizayo
Ukukhweza okuvamile okuvulekile
Kubekwe egumbini lama-cubicle ngohlaka olwengeziwe lomnyango
Uhlaka lomnyango luzofakwa ngumsebenzisi
Kubekwe egumbini lama-cubicle ngohlaka olwengeziwe lomnyango nesembozo esisobala
uzimele womnyango kanye ne-cove ebonakalayo okufanele ifakwe ngumsebenzisi
· Izinga lokungcola
i-Inm yamanje (A)
Kukalwe njengamanje Ku (A)
I-Icu (kA) O-CO
I-Ics (kA) O-CO-CO
I-Icw (kA) O-CO
Kukalwe njengamanje e-N-pole In (A) 50% Ku, 100% In
Ukwenza ngokwemvelo nesikhathi sokuphula
Arcing ibanga (mm)
Uhlobo olujwayelekile (M) Uhlobo lokuxhumana ngocingo (H)
Langaphambilini Imikhiqizo Ethrendayo China Ycm8 I-MCCB eguquguqukayo ene-220V, 50 / 60Hz MCCB
Olandelayo: Ukuchazwa okuphezulu I-China Mini Circuit Breaker Miniature Circuit Breaker MCB CE Kema Isitifiketi